नेपाल आज | कृष्णदास महाराजः महायोगी कि महाढोंगी ? (भिडियो सहित)
योगी विकासानन्द भन्छन्ः कृष्णदास महाराज ठग र धोकेवाज अक्सिजनबिनाको साधना प्रमाणित भए जीबनभर उनैको शिष्य बन्ने
योगी डा विकासानन्दले कृष्णदास महाराजलाई ठग र धोकेवाजको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले महायोगी सिद्धबाबा कृष्णदास महाराजलाई अक्सिजनबिना ९ मिनेट बसेर देखाउन चुनौतिपनि दिएका छन् । चैते दशैंको सन्दर्भ पारेर कृष्णदास महाराजले पोखरामा अक्सिजनरहित बाकसमा ९ दिने समाधि लिएको घटनालाई उनले ठगी र जनताप्रतिको धोकाधडीका रुपमा अर्थाएका छन् । उनले कृष्णदासजीको समाधि प्रमाणित भए जीबनभर उनकै शिष्य बन्ने बाचा गरेका छन् । खाना नखाइ २ बर्षसम्म तपस्या गरेको भन्ने रामबहादुर बम्जन र अक्सिजनबिना ९ दिन समाधिमा बसेको बताउने कृष्णदास दुबै ढोंगी रहेको उनको भनाइ छ । अक्सिजनबिना ९ दिन बांच्न सम्भव नै छैन । यो सरासर ठगी हो । यो नेपाली जनतालाई दिइएको धोका हो । यदि होइन भन्ने हो भने वैज्ञानिकरुपमा प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्यो । सिसी क्यामरा राख्नुपर्यो । २–४ जना डाक्टर राख्नुपर्यो । त्यसबाट प्रमाणित भयो भने त यो विश्वकै लागि खुशीको कुरा हो । मानवजातिकै लागि चमत्कारको कुरा हो । यस्तो कुरामा पनि म टेष्ट दिन्न भनेर बस्नु ठगी होइन र ? यदि ठगी होइन, प्रमाणित गर्ने हो भने आउनु । कृष्णदासजीले अक्सिजनबिना ९ दिन बसेर प्रमाणित गर्नुभयो भने म वहांको जिन्दगीभर शिष्य बन्छु । एकदमै ठगी हो । यसअघि यस्तै ठगी गरेको थियो रामबहादुर बम्जनले । २ बर्षसम्म केही खाएको छैन भन्ने । ब्लड टेष्ट गरौंभन्दा नगर्ने । तर मोटाउंदै जाने । टेष्ट गर्दा त थाहा भइहाल्थ्यो । खाको नखाको । अहिले कृष्णदासजीलाई चिकित्सकले च्यालेन्ज दिए ।
मैले बनाको बाकसमा नौ दिन होइन नौ मिनेट बसेर देखाऊ । सकेनन् । गुरुले ठग्न मिल्दैन । ठगले मिल्छ । ठगको मापदण्ड हामीले बनाउने होइन । (लामो हासो) प्रमाणित गरुन् अक्सिजनबिना बसेर । म शिष्य बन्न तयार छु ।
योगी विकासानन्दसंगको भिडियो संवादका लागि यहां क्लिक गर्नुहोस् ।
विज्ञानले सामान्य मानिस अक्सिजनबिना ३ मिनेटभन्दा बढी बांच्न नसक्ने दाबी गर्छ । कतिपय व्यक्तिसंग परिश्थितिसंग जुध्ने क्षमता अत्याधिक हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति औषध मानिसभन्दा केही सेकेन्ड बढी बाच्न सक्छन् । अक्सिजनको प्रभाव सबैभन्दा बढी मस्तिष्कमा पर्दछ । अक्सिजन नभएपछि मस्तिष्क कोष मर्न थाल्छन् । तीन मिनेटभित्रमा कोषमा पूर्ण क्षति भइसक्छ । मरेको कोषलाई पुनः व्युंताउन सकिन्न । त्यसैले मान्छे केही गरीपनि ३ मिनेटपछि बचाउन सकिदैन ।
समाधिबारे कृष्णदास महाराजको प्रष्टिकरण
समाधि परीषणको विषय होइन । यसको आफ्नै विधि छ । प्रमाणित गर भन्नेहरुले समाधिको अर्थ बुझेका हुंदैनन् । समाधिमा बसेपछि मेरो शरिरलाई चाहिने स्वास शरिरले एकैचोटि खिचेर लिन्छ । त्यसपछि शरिर स्थिर अवश्थामा जान्छ । सामान्य अवश्थामा म अक्सिजनबिना बाच्नै सक्दिन । तर, समाधिको बेला शरिर भिन्दै अवश्थामा पुगेको हुन्छ । म आफुलाई प्रमाणित गर भन्दै जान्न । तर मेरो विधिलाई कसैले प्रमाणित गर्न चाह्यो भने म उसलाई स्वागत गर्छु । अहिले गरेको समाधि सामान्य हो । म अब आठ गज गहिरो खाडलमा समाधि लिन्छु । आठ गज अर्थात झण्डै १६ हात मुनि बाकसमा म बस्छु । बाकसलाई मज्जाले माटोले पुर्ने । म २०÷२२ दिन वा त्यो भन्दापनि बढी बस्न सक्छु । यसका लागि नेपाल सरकारले मलाई अनुमति देओस् ।
को हुन् विकासानन्द ?
विकासानन्दलाई कसले जन्म दियो एकीन छैन । किनभने उनी २०१८ साल असार २ गते सालनाल सहित फालिएको अवश्थामा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा भेटिएका थिए । उनलाई पूर्णदेबीले संरक्षण गरिन् । सानैमा उनी कब्जियतको शिकार भए । आहारविहार र शारिरीक अभ्यासले उनी असाध्य भनिएको रोगबाट मुक्त भए । त्यसपछि उनी योग साधनामा लिप्त भए । २०३९ सालमा जनकपुरको नराहामा गहिरो योग साधना गरे । त्यसपछि उनी भारत गए । हिन्दुशास्त्र र बौद्ध शास्त्रको गहिरो अध्ययन गरे । पिएचडी गरे । २०४७ सालमा नेपाल फर्के । योग सिकाउन थाले । मन नै रोग र भोगको कारक रहेको उनको निष्कर्ष थियो । मनलाई पूर्णतया बदल्न र बसमा राख्न सके आफुलाई परिवर्तन गर्न सकिने सुत्र उनले पहिल्याए । संसार बदल्न आफैंबाट शुरु गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकाले । यहींबाट शुरु भयो मनोक्रान्ति अभियान ।
को हुन् सिद्धबाबा महायोगी कृष्णदास महाराज ?
सोलुखुम्बुको जुलु गाविसमा २०३० सालमा जन्मिएका कृष्णबहादुर गिरी साधनाका माध्यमबाट सिद्धबाबा महायोगी कृष्णदास महाराज बने । उनी आमाको गर्भमा रहदा उनका बुबा छबिलाल गिरीलाई सपनामा भगवानले कौशिकी नदीको तटमा शिबलिङ्ग रहेको जानकारी दिएको र बुबाले १५ दिनसम्म खोजि गर्दा अढाइ फिट अग्लो शिबलिङ्ग भेटिएको उनी बताउछन् । बाल्यकालमै उनमा अलौकिक शक्ति देखिएको उनको अनुभव छ । कृष्णबहादुर सानै उमेरमा भारत गएका थिए । उनले भारतको महाराष्ट्रको पुने र बम्बइमा धेरै समय विताए । क्रिश्चियन मिसनरी विद्यालयमा पढ्दा उनले बाइबलको राम्रै अध्ययन गरे । उनलाई पादरी बनाउने प्रयत्नसमेत गरिएको उनी बताउछन् । विस्तारै उनको लगाव सनातन वैदिक संस्कारतर्फ बढ्यो । महाज्ञान पाउन नसक्दा उनले आत्महत्या समेत गरेका रहेछन् । भागिरथ नदीमा मर्नैका लागि हाम फालेपनि उनी १० किलोमिटर परसम्म बगाएपछि बांचेका थिए । उनी बैष्णब बह्र्माचार्य हुन् । सिद्धि र साधनामार्फत उनी श्री श्री १००८ श्री सिद्धबाबा महायोगी कृष्णदास महाराज जी बने । उनी महायोगका प्रचारक हुन् ।
उनी विज्ञानका विद्यार्थी हुन् । उनले दिएको जानकारी अनुसार उनले पुनेमा बोटनी पढे । गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालयबाट जडिबुटी विज्ञानमा पिएचडी गरे । जन्मभुमीको विकासका लागि उनी नेपाल फर्किएको बताउछन् । सुनसरीको चतरामा उनले रामानन्द पीठ खोलेका छन् । २०६५ र २०७२ मा गरी उनले दुई पटक सार्वजनिकरुपमै समाधी लिइसकेका छन् । २०७२ को मसान्तताका लिएको ९ दिने समाधिले उनलाई चर्चा र विवादको घेरामा तान्यो ।
को झुठ ?
विकासानन्द र कृष्णदास महाराज दुबै योगी हुन् । दुबैका अनुयायी छन् । एकै क्षेत्रका यि दुई प्रतिष्ठित व्यक्ति मध्ये विकासानन्दले कृष्णदास महाराजलाई ठग र धोकेबाजको आरोप लगाउनु सामान्य होइन । कृष्णदासले आफ्नो समाधि पुष्टि नगरे वा गर्न नसके एकाएक कमाएको उनको प्रतिष्ठा प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । यदि, उनले अक्सिजन नलिइकनै ९ मिनेटभन्दा बढी बांचेर देखाइदिए भने त्यसपछिको परिश्थिति अर्कै हुनेछ ।
कम्तिमा पनि अरुलाई अनुयायी बनाउंदै हिड्ने योगी विकासानन्द उनका सेवक अर्थात शिष्य हुनेछन् । यसले कृष्णदास महाराजको लोकप्रियता झनै बढाउनेछ । विकासानन्दले सार्वजनिकरुपमै दिएको चुनौतिलाई कृष्णदास महाराजले स्विकार गर्लान नगर्लान प्रतीक्षाको विषय भएको छ।
krishna das maharaj vikashananda